“အတွေးစလေးတွေ”: ဆားပုလင်းဟန်ကြည်ရဲ့ တစ်ညနေ . . .
အပေါ်က ကျောင်းသားကို ဘယ်လို ထိန်းကျောင်းလိုက်လဲ ဆိုတာ သိချင်မိတယ် ဆရာ။
အရင်က ကျနော်လည်း ဆရာတွေ နောက်ကို တကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ ဆရာလုပ်မိခါနီး အထိပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လိုင်းရွေးမှာသွားတယ် လို့ပဲ ပြောရမလားပဲ။ ဆရာတွေကတော့ အခုထိ ပြောလို့ မဆုံးပါဘူး။ မြန်မာကို ပြန်လာရင်တော့ လာတွေ့ပါဦးမယ် ဆရာ။
ဆရာ ရဲ့ အခက်အခဲ တွေနဲ့ စေတနာ တွေကို နားလည် ခံစားသွားပါတယ်ဗျာ
ကိုဇော်ရေ...အဲဒီကျောင်းသားကို စောင့်ကြည့်နေရတုန်းပါဗျာ...ဆေးတစ်မျိုးပေးပြီးရင် ဆေးရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကို စောင့်ကြည့်ပြီးမှ ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်ရသလိုပေါ့...
သဘောပေါက်တယ်.... ဒီခေတ်ကျောင်းသားတွေ အခြေအနေကို ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်... စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လုံး သေချင်စော်ကို နံနေတာပဲ..း)... ကျောင်းသားမကောင်းလို့ မသင်တော့ဘူးဆိုပြန်ရင်လည်း မိဘမျက်နှာနဲ့ ရှေ့ရေးကို မျှော်တွေးလို့ သင်နေမိပြန်ရော..... ဆရာတွေရဲ့ဘ၀က ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ဘိန်းမိနေသလိုပဲ..... မကောင်းမှန်းသိပေမယ့်.. မရှူလို့လည်း မနေနိုင်ပြန်ဘူး...း)))
ဆရာ အလုပ်ဆိုတာကို လွယ်တယ် လို့ တခါမှ မထင်ခဲ့ဖူးပါ။ လေးစားပါသည်။
ဆရာ ..လုပ်ရတာ .တကယ်စိတ်ရှည်ရတယ် .စာသင်ဖူးတယ်..အရမ်းဆိုးတဲ့ ကျောင်းသူတွေနဲ ကြုံခဲ့ဖူးတော့ ကိုယ်ချင်းစာတယ် .ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာလဲ သိတယ်..ဆရာဆိုတာ ဥယျာဉ်မူးပါ..အသီးအပွင့်တွေကို ကြည့်ပြီး ပျော်နေတဲသူမျိုးပါ.
စိတ်ရော စေတနာရောထည့်ထားတဲ့ ဆရာတယောက်ရဲ့ဘ၀က တကယ်မလွယ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ :))ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ